Estradiol benzoate Inaliti (estrogen) - China Ningbo Second hormone
Estradiol benzoate Inaliti (estrogen)
Estradiol benzoate Inaliti (estrogen) [Inkcazelo] Lo imveliso mthubi ulwelo olunamafutha ngaphaya luthuthu. [Umsebenzi kunye nokusetyenziswa] Kunokuba ikhuthaze uphuhliso iimpawu zesini yesibini kwaye ukuyilwa esini izilwanyana ababhinqileyo, ukuphucula umsebenzi ukusikwa ngenxa uteruses kunye oviducts, ukunyusa uvakalelo of uteruses ukuba yioxytocin, nokukhuthaza ukunyenyiswa orifices wesibeleko. Oku uyakwazi ukukhuthaza uphuhliso lwenkqubo duct mammary. Omncinci dlala ...
Estradiol benzoate Inaliti (E strogen )
Le mveliso i yellow ulwelo olunamafutha ngaphaya luthuthu.
Kunokuba ikhuthaze uphuhliso iimpawu zesini yesibini kwaye ukuyilwa esini izilwanyana ababhinqileyo, ukuphucula umsebenzi ukusikwa ngenxa uteruses kunye oviducts, ukunyusa uvakalelo of uteruses ukuba yioxytocin, nokukhuthaza ukunyenyiswa orifices wesibeleko. Oku uyakwazi ukukhuthaza uphuhliso lwenkqubo duct mammary. Omncinci dlala, oko ingazisa izilwanyana ababhinqileyo ukuba inkanuko yesini kunye nemincili ngokwesondo. Le mveliso lisetyenziswa ngokuthe imifinya egciniweyo ezingekazalwa, endometritis, kunye zesibeleko pyometra emva kokunikezelwa izilwanyana ababhinqileyo. Kwakhona ingasetyenziselwa izihlunu zesibeleko buthathaka xa kusetyenziswa ukubambisana kunye yioxytocin. Ukongeza, lisetyenziswa kwinkqubo yophuhliso unamadlala mammary kwi uqhelwaniso lokwaphusa ukuba iinkomo.
1. kusetyenziswa ukubambisana kunye Pregnant Mare serum Gonadotropin ukwenza imiqondiso estrous izicacele ngexesha ekukhuthazeni estrus: ukuze kulungiselelwe ekufumanekeni estrus benze imiqondiso estrous yacaca xa Pregnant Mare serum Gonadotropin lisetyenziswa ukukhuthaza estrus, inaliti intramuscular ka 6-8mg of estradiol benzoate unako ukusebenza ngomhla wesibini emva kokusebenzisa Pregnant Mare serum Gonadotropin.
2. Ukuphucula uvakalelo izihlunu zesibeleko ukuya yioxytocin: Ukusetyenziswa estrogen kwinkqubo inenimba Awukwazi ukunyusa kuphela kuvulwe orifices wesibeleko, kodwa ukwandisa uvakalelo izihlunu zesibeleko ukuya yioxytocin. Phambi kokuba kutyalwe yioxytocin, estradiol benzoate uya lesitofu, kunye nomthamo imi ngolu hlobo lulandelayo: 3-10 mg ngokuba iihagu, 5-20mg iinkomo, 10-20mg yamahashe, 1-3 mg emfutshane, 0.5-2.0mg ngenxa izinja, kunye 0.2-0.5mg ngenxa neekati.
3. Unyango lwezifo zesibeleko: it esinganyanga endometritis, zesibeleko inertia (subinvolution of wesibeleko), yaye igcinwe imifinya ezingekazalwa emva kokubeleka xa kusetyenziswa ukubambisana kunye yioxytocin. Estradiol iya lesitofu kuqala (20-30mg zemfuyo enkulu, 10-20mg kuba embindini-ertyisi imfuyo, kwaye 5-10mg izilwanyana ezincinane), yaye emva koko yioxytocin iya kusetyenziswa unyango (75-100IU iinkomo namahashe, 30 50IU for iihagu neegusha, 10-25IU ngenxa izinja, kunye 5-10IU ngenxa neekati); Inaliti intramuscular okanye inaliti ye intrauterine kuya kusetyenziswa, kanye kwiintsuku ezisi-7.
4. Ngokukhuthaza estrus: ngeedosi eziphezulu estradiol benzoate zingasetyenziswa ukukhuthaza estrus izilwanyana anoestrus clinical; Noko ke, le estrus zeli xesha ikholisa ukunika kuvuka kuphuhliso eqhelekileyo follicle ukuba ovulate, kodwa ukubuyisela umjikelo estrus. Le nomthamo yile ilandelayo: 10-20mg ngokuba iinkomo namahashe; 5-10mg for ezihagwini; 3-5mg izimvu.
1. amathamo High, ixesha elide okanye ukusetyenziswa engeyiyo le mveliso kunokubangela cysts ovarian, isisu, yoma ovarian babanjwe umjikelo Harassment izilwanyana ababhinqileyo.
2. Contraindicated kwizilwanyana ukutya.
3. kusetyenziswa kuphela ukuzala isilwanyana.
4. Kufuneka iphathwayo ngabantwana.
iintsuku 28 iinkomo, iigusha kunye neehagu (tentative); iintsuku 7 ubisi (tentative)
Eziphawuliweyo yaye zokungenisa; agcinwe phantsi lobushushu 30 ℃.
Previous: Dexamethasone phosphate Inaliti
Okulandelayo: Gonadotropin for Inaliti (GnRH)
Estradiol benzoate 0.2% Inaliti
Estradiol benzoate Inaliti yezilwanyana
Oestradiol benzoate Inaliti
LHRH-A2 for Inaliti Bovines & Swine
Iadrenaline Hydrochloride Inaliti
Yioxytocin Inaliti (Pitocin)